Snapchat ọ na-emetụta ndị ahịa? | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 4, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Na impromptu nghoputa na obodo Martech anyị, 56% nke ndị zaghachiri kwuru na ha enweghị atụmatụ n'afọ a site na iji Snapchat maka ahịa. Naanị 9% kwuru na ha na-eji ya ma ndị ọzọ kwuru na ha ekpebibeghị. Nke ahụ abụghị oke mkpọtụ na ntanetị na ntanetị na-eto n'ike n'ike.
Onwe m, achọpụtara m na ọ na-agbagwoju anya ma na-agbakasị oge ọ bụla m mepere ngwa ahụ. Emechara m chọta akụkọ na snaps na netwọkụ m, mana na enweghị nkụda mmụọ. Banyere ikenye snaps m, anaghị m eme.
Site na nde mmadụ 150 na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị yana 60% ha na-ebipụta kwa ụbọchị, agbanyeghị, enwere ike m agaghị eleghara ikpo okwu anya. N'ezie, n'ụbọchị ọ bụla, Snapchat ruru 41% nke ụmụaka niile dị afọ 18 ruo 34 na United States.
Na a mobile-naanị ọrụ, Snapchat bụ a netwọk na-adaba n'ụzọ zuru oke na mmadụ n'akpa uwe. Na-ehichapụ ọdịnaya akpaaka, ọ na-enye ndị ọrụ echiche nke ịdị ngwa iji nweta Snapchat mgbe ọ bụla enwere ike, yana ọ na-enyere ndị ọrụ aka ịbịakwute ndị enyi ha.
Na-enyocha Snapchat - Ọ dị ka ọ nwere ike isitụrụ ike ijikwa ma tụọ njikọ aka, mana ohere iwulite mmekọrịta gị na ndị ahịa gị 1: 1 dị na Snapchat. Na ndị na - akparaghị ókè nwere ike iso gị; ị nwere ike ịgbaso akaụntụ 6,000 (anaghị enyocha ya na Snapchat).
akụkọ - Akụkọ Snapchat bụ foto ma ọ bụ vidiyo ị biputere na ngalaba akụkọ nke gị nke gị na ndị enyi gị niile na-ahụ. Akụkọ na-agwụ n'ime awa 24.
Advertising - Snapchat na-enye Snap Ads, Sponsored Geofilters, na Sponsored Lenses na nhọrọ mgbasa ozi ha ugbu a.
Wzọ 3 iji kpọsaa na Snapchat
Snapchatters na-ele vidio vidio 10 kwa ụbọchị, nke bụ ihe karịrị ịrị elu 350% na afọ gara aga naanị. Nleta Mgbasa ozi Snapchat maka ama ndi ozo na otutu ihe omumu.
Mgbasa ozi nfe - bụ mgbasa ozi vidiyo nke 10-abụọ.
Ndị na-akwado Geofilters - bụ ihe nzacha foto pụrụ iche naanị na ebe ịchọrọ.
Ihe Nlekọta Anya - bụ mgbanwe foto ma ọ bụ ọkwa nke ndị ọrụ nwere ike igwu egwu ma gbakwunye na Snaps ha.
Omume kachasị mma na ahịa Snapchat
Nịm gị Snapchat profaịlụ ọha.
Hazie gị Snapcode.
Jiri Snapchat maka asọmpi, zoro ezo peeks, koodu coupon, n'azụ Mpaghara, na okwu mmalite ndị ọrụ.
Sọọ maka 5-15 sekọnd ma mepụta akụkọ bụ 1-2 nkeji.
Na-ekwu okwu n'oge ọnyà gị ma ọ bụ akụkọ gị.
Ihe nkiri ma nyefee foto kwụ ọtọ.
Soro ndị ọrụ Snapchat soro ndị ọrụ Snapchat kwurịtara okwu.
Jiri ederede na emojis
Nke a bụ infographic, Ihe mere Snapchat ji emetụta ahia:
Tags: Emojigeofilterssnap mgbasasnapchatsnapchat chọpụtasnapchat ahiasnapchat onye ozisnapcodeakụkọ snatchatnkwado anya mtaco mgbịrịgba lenseibe weebụ
Feb 5, 2017 na 5:14 PM
Dabere na data ndị na-adịbeghị anya, Snap (nkata) nwere ndị ọrụ DA158 150M. N'ezie, a mobile ngwa lekwasịrị anya Western ahịa: North America (US, Canada) na (nwere obere) Europe (UK, FR). Echeghị m na "Site na nde mmadụ 60 kwa ụbọchị na-arụsi ọrụ ike na XNUMX% n'ime ha na-ebipụta kwa ụbọchị" bụ ọghọm. Ọtụtụ ndị na-eji Snap (nkata) iji soro ndị ọzọ na-enweghị ịde akụkọ.
Feb 8, 2017 n’elekere 9:49 nke abali
Ọ na-esiri m ike iji ya ma na-echekarị "gịnị ka m ga - eziga?" tupu ịmalite ịga Instagram ma ọ bụ laghachi na Facebook. Maka azụmaahịa dịtụ obere, nihi na ọ bụrụ na ị kọwaa ozi gị, ọ bụ naanị maka ịmegharị ya na ikpo okwu ma kpọọ egwu iji rụọ ọrụ mana ọ ka bụ netwọkụ na-adịghị mma iji. Anyị ga-ahụ etu ha si eme mgbe IPO ha gachara.